“ Porn မနှစ်သက်သောအနှစ်တစ်ထောင်ယောက်ျားများ” - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ဖြစ်သည်
“ အပျိုစင်မနှစ်သက်သောအနှစ်တစ်ထောင်ယောက်ျား” \_ t
ငါ porn ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါ 'ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်အနေဖြင့်တသန့်ခံစားကြရသည်။ ကိုယ့်ငါပိုကောင်းတဲ့လုပျနိုငျကိုငါသိ၏။ ''
ပထမဦးဆုံးအကြိမ် Greg Anderson က 12 ၏အသက်အရွယ်မှာအွန်လိုင်း porn စောင့်ကြည့်သူဘာမျှမခံစားခဲ့ရပါတယ်။ သူမ၏အထီးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပေါ်ကနေအချည်းစည်းဆံပင်ရွှေရောင် writhing သည်သူ၏အကျိုးစီးပွား piqued နေစဉ်, သူကပုံရိပ်ဝတ္ထုကြောင့်ကြောင့်သူ့ကိုမလှန်ကြောင့်ထိုသို့ပြုခဲ့အောက်မေ့။ တကယ်တော့ဒါဟာဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၏ - သူစင်မြင့်ပေါ်မှာရုပ်ပြဗုံးစောင့်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်ကဲ့သို့သူ့ကို, squint နှင့်သံသယ, မျက်နှာပြင်ဘေးတိုက်ကိုကြည့်လုပ်လေ၏။ "ဒါဟာချက်ချင်းအတုခံစားခဲ့ရနှင့် overacted" ဟုသူကပြောပါတယ်။ ငါနှင့်အတူညစ်ညမ်းချိတ်ဆက်ဖို့စတင်ခံစားချက်ရဲ့ဒါကြောင့် "ငါကာတွန်းကိုကြည့်မှခံစားချက်ရတဲ့ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ငါတကယ်ကသို့ကိုယ့်ကိုဘယ်တော့မှခဲ့ပါတယ်။ "
နှစ်ကြာပြီးနောက် Anderson တို့ကသူ၏မိတ်ဆွေများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုမကြာခဏသူ porn ကိုကြိုက်ပါဘူးသင်ယူဖို့အံ့သြနေကြသည်ဟုဆိုသည်။ "သင်ယောက်ျားတစ်ယောက်ပါပဲ, သင်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော" Anderson ကသူ့ကိုပြောသည်သည့်အခါမိမိအအထီးမိတ်ဆွေတဦးတည်းမယုံမထီမဲ့မြင်ပြု။
Anderson ကသူယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့တော်တော်လေးသေချာဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ရောနှောကြီးစိုးကျားစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်လိင်ကျွမ်းကျင်သူများအဆိုအရသူလည်းမုသာကိုသုံးသောပါပဲ။ ကျော်ကြားတဲ့လိင်ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်ဒန်ဗေ့ခ်ျအဖြစ် ထည့်ပါ"အားလုံးယောက်ျား porn ကိုကြည့်။ သူတို့ porn ကိုကြည့်ကြဘူးဟုဆိုသောယောက်ျား၏လက်တဆုပ်စာမုသာဝါဒီသို့မဟုတ်သင်းပါ။ "မေးခွန်းတစ်ခုသတင်းစာပညာ စုစုပေါင်း Sorority ရွှေ့ စာရေးဆရာပင်မှသကဲ့သို့ဝေးသွား၏ အကြံပြု တစုံတယောက်သောသူသည်ဝမ်းမြောက်စွာပဲရန် "အသင်းအဖွဲ့ချုပ်နှင့် anaphylactic shock" ဟုမိမိကိုယျကိုပေးပါမယ်လို့ "နှစ်ခုမိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးကိုအလွန်တရာလက်တွေ့ကျကျရှာဖွေနေအားကစားရုံလူတန်းစားစဉ်အတွင်းပေါ်မှာ get စောင့်နေကြလော့။ "
အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် အများကြီး Anderson က porn အကြောင်းကိုမများကဲ့သို့အမျိုးသားများ၏ခံစားရတယ်။ တစ်ဦး၏အဆိုအရ 2016 လေ့လာချက် ထဲမှာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, အကြမ်းဖျင်း 1 ယောက်ျားအတွက် 10 (လုံးကစောင့်ကြည့်ကြဘူးစယ်အမှတ်တံဆိပ် ) သူတို့ထဲကတဦးတည်းဖြစ်ခြင်း။ သုတေသနနှင့်မီဒီယာကြည့်ရှုအပေါ် porn နှင့်၎င်း၏ဆိုးကျိုးများ၏စားသုံးမှုကိုအာရုံစိုက်ဖို့လေ့ကတည်းကသို့သော်အနည်းငယ်သာသတင်းအချက်အလက်သူကလူကိုဖော်ပြရန်တည်ရှိ မဟုတ် ဒါကြောင့်စောင့်ကြည့်။
ဒါကြောင့်သူကိုဤအညစ်ညမ်း-ambivalent လူဖြစ်ကြ၏, သူတို့ဘာငရဲဆန့်ကျင်ကြပါနဲ့ မတော်တဆစအို Vol ။ IV?
Garrett အလန်ကသူသည်မိမိတီထွင်ဖန်တီးမှုဖြုန်းရဲ့ကဲ့သို့သူ့ကိုခံစားရစေသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက porn ကိုကြိုက်ပါဘူး LA ကနေ 22 နှစ်အရွယ် cello ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ "ငါသည် လာ. ပြီးနောက်ကိုယ့် '' ငါအခုဘာလုပ်နေကြသလော '' နှင့်တူအဲဒီမှာထိုင်" ဟုသူကငါ့ကိုပြောပြတယ်။ "ငါသည် hyper Self-အသိအမြင်၏ဤခံစားမှုရ, ငါအပြစ်ရှိခြင်းနှင့်ညစ်ပတ်ခံစားရရန်စတင်ပါ။ " သူ့ကို YouPorn အပြည့်အဝမယ့် browser ကိုဆုံးမသွန်သင်သောဘာသာရေးပြုစုပျိုးထောင်ငရဲတစ်လမ်းလက်မှတ်ခဲ့ပေမယ့်လည်းဖွင်ကြောင့်ကြောင့်အပိုင်းဖြစ်ပါသည် မိမိအစိတ်ကူးစိတ်သန်း - သူစွန့်ပစ်ခြင်းမှာကျန်းမာသန်စွမ်း, ပိုကျေနပ်စရာ tool ကိုရှိပါတယ်သိတယ်လို့ပဲ။ "ကျွန်မရဲ့စိတ်တွင်ဖန်တီးအဆိုပါ porn ဖြစ်ပါသည် so အွန်လိုင်း porn ထက်အများကြီးပိုကောင်း "ဟုသူကပြောပါတယ်။ "လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်ကိုငါ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့်အမှတ်တရများကိုသုံးပြီးတစ်ဦးပိုပြီးပြည့်စုံရာစိတ်ခံစားမှုနှင့်ဝိညာဉ်အတွေ့အကြုံဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့်, ငါ့အော်ဂဇင်သန်မာစေသည်။ "
"ကျွန်မရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးယဉ်တီထွင်သည့်အခါတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပျက်နိုင်ပြီး, ငါတကယ်အသစ်ကအခြေအနေတွေအတူတက်လာမှကိုယ့်ကိုကိုယ်တွန်းအားပေးပျော်မွေ့" ဟုသူကဆက်လက်ရေးသားထားသည်။ "ဒါဟာငါ့ကိုငါ့ကိုယ်ပိုင်အပျော်အပါးအတွက်ပိုပြီးပါဝင်ပတ်သက်, ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကပိုမိုချိတ်ဆက်ခံစားရစေသည်။ ငါ porn စောင့်ကြည့်သည့်အခါ, ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကနေတသန့်ခံစားကြရသည်။ ကိုယ့်ငါပိုကောင်းတဲ့လုပျနိုငျကိုငါသိ၏။ "
စိတ်ဝင်စားစရာအများအပြားလေ့လာမှုများရှိ သရုပ်ပြ အာရုံကြောဆက်သွယ်မှုနဲ့မှတ်ဉာဏ်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းထိန်းချုပ်အထီး porn ကြည့်ရှု၏ဦးနှောက်အတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်, သင်ယူခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်အတွက်လျှော့ချ, ဒါကြောင့်သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်ဖြုန်းနေတူသောလူတခြို့ခံစားရပါစေအံ့သောငှါသဘာဝကျပါတယ်။
အခွားသောလူတို့သညျ porn သရုပ်ဆောင်များကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်အတူပြဿနာများရှိသည်။ သုံးဆယ့်သုံးလုံးနှစ်အရွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစားပွဲထိုး Xavier (ကကလောင်အမည်) ဖြောင့် porn သို့ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်သူကအခြားလူရဲ့လိင်တံ၏မျက်မှောက်သို့မဟုတ် dude-ဘောလုံး၏စဉ်ဆက်မပြတ်အနီးကပ်မခံမရပ်နိုင်။ "ဒါဟာကိုယ့်ကြောင့်များထဲကငါ့ကိုကြာ" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "porn အတွက်ယောက်ျားတွေအများအားဖြင့်ဒါများမှာအထူးသဖြင့်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ငါအထီးကိန်းဂဏန်းဆန့်ကျင်ဘာမျှရရှိပါသည်, ဒါပေမယ့်ငါပယ်ရဖို့ကြိုးစားနေတာပါသောအခါငါကမြင်ချင်ကြဘူး creepy ။ အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကအမြဲအတွင်းမှနေကာမျက်မှန်ဝတ်ဆင်ကြသလဲ အဘယ်ကြောင့်ငါတစ်ဝမ်း-button ကိုတက်တူးထိုးရှိပြီးအိမ်တွင်းသဘောကွဲလွဲ Aviation ကျီသူတစ်ကောင်လေး၏လိင်တံကိုမြင်ချင်မလဲ? "
သဘာဝကျကျထို့နောက်သူလည်းထိုအ bespectacled လိင်တူဆက်ဆံသောမိန်းမအဘို့အမကောင်းတဲ့ခံစားရပါတယ်။ သူကသူတို့တော်မူသည်အတိုင်း porn သရုပ်ဆောင်တွေက nauseated မဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဝန်ခံသည်သော်လည်း, သူသည်မိမိကိုမိမိကသူတို့ကိုပေါ်ကိုသူ့ကိုယ်ပိုင်စိုးရိမ်ထုတ်လုပ်တဲ့အစားသူတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုရဲ့ရလဒ်ခံစားတွေ့။ သူတို့အဆင်မပြေမှုထဲကဤသို့ပြုကြသနည်း သူကသူ့ကိုယ်သူမေးတယ်။ တကယ့်ကြည်ကြည်လား? ငါသည်သူတို့မလိုနဲ့တူနှင့်အတူကကျော်ရရှိရန်စိတ်ပိုင်း dissociating ပါသလား?
"ငါကအဓိပ်ပါယျမရှိသောင်ကိုသိပေမယ့်ငါပါဝင်ပတ်သက်လူတိုင်းအတွက်မကောင်းတဲ့ခံစားတက်အဆုံးသတ်" ဟုသူကရယ်တတ်၏။ "ငါသည်ပိုကောင်း porn ထွက်အဲဒီမှာရှိမယ့်သေချာပါတယ်, ဒါပေမဲ့ဒါဟာဆွဲဆောင်မှုစစ်မှန်သောကြည့်နဲ့အထီးတင်းပါးတစ်အနည်းဆုံးငွေပမာဏငါ့မျက်နှာကိုရှိမယ့်ဘယ်မှာတဦးတည်းကိုရှာဖွေသောဗီဒီယိုများရာပေါင်းများစွာမှတဆင့် sort ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ထက်ငါ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းသုံးစွဲဖို့ပိုမိုလွယ်ကူမယ့်ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ခံစားရသည်။ "
ယင်းရောင်စဉ်၏ဆန့်ကျင်ဘက်အဆုံးတွင်အန်ဒီ, 29, အဘယ်သူ၏တိုတောင်းခြင်းနှင့်သွယ်ကောင်ဟာ beefy နှင့်အတူဘုံအတွက်တစ်တန်ရှိသည်ပါဘူးတဲ့ Barista, AB-addled ဖြစ်ပါသည် Magic Mike သူကိုချောင်းမြောင်းလူကို-on-လူကိုလမ်းကြောင်းများကြီးစိုးသောသူ lookalikes ။ "Porn သရုပ်ဆောင်များကိုငါ့ကိုမလုံခြုံဟုခံစားရပါစေ" ဟုသူကပြောပါတယ်။ "ကျွန်မခန္ဓာကိုယ်သို့မဟုတ်ဒစ်ထဲမှာသူတို့လိုဘာမျှမကြည့်ရှုပါ။ ငါကခန္ဓာကိုယ် dysmorphia သို့မဟုတ်ပဲဥယျာဉ်တော်-အမျိုးမျိုးအနိမ့်ယုံကြည်မှုင်လျှင်မသေချာဘူး, ဒါပေမယ့်ငါမှ၎င်းတို့၏အလောင်းများကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ, ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားရှုံးသည်။ "
ဒါဟာအတော်လေးဘုံဖြစ်ပါသည် - porn မြှင့်တင်များအတွက်တရားမျှတမကောင်းတဲ့ရက်ပ်ရရှိသွားတဲ့စဉ် မမျှတခန္ဓာကိုယ်စံချိန်စံညွှန်းများ မိန်းမတို့အဘို့, လူများများလွန်း, ၎င်းတို့၏အလောင်းများကိုအကြောင်းကိုမလုံလောက်ခံစားရစေသည်။ တကယ်တော့ပိုညစ်ညမ်းနေတဲ့လူကိုချောင်းမြောင်းပု ပိုပြီးမကျေနပ် သူကအထူးသဖြင့်သူတို့အဘို့, သူ့ပုံ, အနိမ့်ယုံကြည်မှုနှင့်ဆင်းရဲသောစိတ်ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မထားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေသတည်းဖွယ်ရှိင် အဘယ်သူ၏အလောင်းကောင်စနစ်တစ်ခု fit ပါဘူး.
အားလုံးယောက်ျားတွေသော်လည်း, လိင်သို့မဟုတ်အလောင်းတွေဖြစ်သင့်ပုံကိုတစ်မော်ဒယ်အဖြစ် porn မမြင်ရ။ ဒါကြောင့်လိင်မယ့်အရာတစ်ခုခုသည်သူတို့ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ကြိုးစားနေရဲ့နဲ့တူပါက, မှားယွင်းသောခံစားရဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့က, အန်ဒါဆင်နဲ့တူပါကမကြိုက်ပါ။ "နီးပါးသင် porn ထဲမှာမြင်ရတဲ့အခြေအနေတွေ, ရာထူးသို့မဟုတ် inane တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလိုင်းများအဘယ်သူအားမျှအမှန်တကယ်စစ်မှန်သောအသက်တာ၌ဖြစ်ပျက်, ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲငါ့ထံသို့လိင်တစ်ဦးရုပ်ပြောင်များကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရရဲ့" ဟုသူကရှင်းပြသည်။
အထံတော်သို့ပင်အပျော်တမ်းပစ္စည်းပစ္စယ, ဘယ်မှာ clichéပီဇာယောက်ျားတွေသို့မဟုတ်ရေပိုက်သမားမျှ ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်စုံတွဲများအမှန်တကယ်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားလိုပဲလုံးဝညာဘက်ခံစားရပါဘူးဟန် - ကျေးဇူးတင်စကားမှလျော့နည်း-ထက်စံပြ iPhone ကိုရုပ်ရှင်ပညာ, ကတကယ်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုတွေ့မြင်သို့မဟုတ်ဤအချက်မှဦးဆောင်သောအထူးသဖြင့်နားလည်ရန်ခက်ခဲပါတယ်။ "ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီကတခြား fucking ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများရိုက်ချက်များ-up, ပိတ်ဖို့ရန်လိင်အပြည့်အဝအာရုံခံအတွေ့အကြုံကိုလျော့ကျစေပါတယ်" ဟုသူကရှင်းပြသည်။ "ဒါကအေးမြရဲ့နှင့်တစ်ခါတစ်ရံကြည့်ဖို့ကောင်းတဲ့နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့် sex ကောင်းသောအဘယ်အရာကိုများခဝါသည်ရုပ်ပုံလျစ်လျူရှု။ အဘယ်အရာကိုနမ်းခြင်း, မျက်လုံးချင်း, အသိမ်းပိုက်ခံရခြင်း, အနံ့နှင့်ထိုအမှုအရာပူသောအခြေအနေတွင်ကော? "
သင်တန်း၏, ရှိပါတယ် သန်းပေါင်းများစွာသော လိင်၏ပိုပြီးကွဲပြားခြားနားအမျိုးမျိုးပုံဖော်, ဒါပေမယ့်တချို့ယောက်ျားအဘို့, ပထမဦးဆုံးကျပုံစံ porn အများကြီးစောင့်ကြည့်နောက်ပိုင်းမှာညစ်ညမ်းမဆိုကြင်နာထံမှသူတို့ကိုပယ်ခုတ်မောင်းကြောင့်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များရှိနိုင်သည်ကိုဗီဒီယိုများ။ PanchDog အမည်ရှိ redditor "ဒါဟာငါနှင့်အတူ fucking နှင့်လိင် depersonalizing စတင်" shared တစ်ဦး / r / askmen ချည်ပေါ် porn မကြိုက်သူကိုလူတို့အားအပ်နှံလိုက်တယ်။ "ငါတကယ်အမျိုးသမီးတွေ objectifying start ခဲ့သလဲ, ငါရှိခြင်းခဲ့လိင်အတွက်ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ပဲဘာတစ်ခုမှ cum မြန်နိုင်သမျှသကဲ့သို့ငါ့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ရုံရှိထဲမှာယိုဝေးပေါင်။ "
သူတို့အားလိုင်းများတလျှောက်တွင်, porn မကြာခဏညာဘက်ရရှိရန်သဘောတူညီခကျြ, အလေ့အကျင့်များနှင့်ဆက်သွယ်ရေးယူကြောင်းအဆင့်မြင့်ရာထူးများနှင့်လေ့ကျင့်မှုလုပ်တာလဲသရုပ်ဖော်, သင်မူကားသရုပ်ဆောင်များကိုတစ်ထစ်ခြင်းမရှိဘဲသူတို့ကိုပယ်ဆွဲမြင်သောအခါ, ကများလွန်း, သင်တတျနိုငျသနဲ့တူပုံရသည်။
Bowen တို့ (စမဟုတ်သည်သူ၏အမည်ရင်း), Denver ကနေ 34 နှစ်အရွယ်သတင်းစာဆရာ, အခက်ခဲလမ်းထွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူက porn တွင်တွေ့မြင်ချင်ပါတယ်သည် "ရွေ့လျား" ကြိုးစားကြည့်ဖို့လုံလောက်တဲ့နုံခဲ့သောအခါသူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှာတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူး အားလုံး ဗီဒီယိုထဲမှာဘယ်လိုမင်းသမီးကိုပြု၏။ ဥပမာအားဖြင့်, သူသည်တစ်ဦးကဗီဒီယိုတွင်တွေ့မြင်င်ကဲ့သို့သူ၏ကောလိပ်ရည်းစားရဲ့လိင်အင်္ဂါကနေသူ့လိင်တံကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်သူမ၏စအိုထဲသို့ RAM ဖို့ကြိုးစားသောအခါသူမကသူမ၏နှုတ်ခမ်းကိုကိုက်ဘူးငါ့ကို fuck ဆိုတဲ့ "ဟုပြော ဖေဖေ"ခဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိမိန်းကလေးလိုပဲ။ အဲဒီအစားသူမအော်ဟစ်နှင့် 24 နာရီပေါ့ပေါ့တာကတော့။ သူထိတ်လန့်ခဲ့ရွားလှခံစားရတယ်။ သူလုပ်ပေးချင်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးအရာသူအစား porn အပ်ဒါသူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဒဏ်ရာရသို့မဟုတ်နှစ်သက်ကြောင်းဒါခေါ် "ကျွမ်းကျင်မှု" ကိုသင်ယူခဲ့ပါတယ်။
"သူကကျွမ်းကျင်မှု-sharing repository ကိုအချို့မျိုးဖြစ်ခဲ့သည်များကဲ့သို့ငါမှာရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါကနေလေ့လာသင်ယူခံရဖို့အများကြီးလည်းမရှိသေးသည်သဘောပေါက်တစ်ချိန်ကငါအမှန်ကိုသိမြင်လာလေသည်" ဟုသူကပြောပါတယ်။ သဘောတူညီခကျြ - ကသူတကယ်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူကူညီလိုတဦးတည်းအရာပြသနီးပါးဘယ်တော့မှသူကပြောပါတယ်။ "ဒါဟာသင်သည်သူတို့လုပ်နေတာနေပစ္စည်းပစ္စယတွေအများကြီးဖွင့်ပြသဘို့ဖြစ်၏သိကြသည့်အခါ entertaining အဖြစ်မဟုတ်ဘူး" Plus အား။ အဆိုပါ #MeToo လှုပ်ရှားမှုများ၏အရိပ်တစ်ဖြောင့်, CIS သောသူကဲ့သို့ Bowen တို့မိမိ interaction ကအတွက်သုံးလို့ရတယ်ပူပြင်းတဲ့လမ်းအတွက်လုပ်ပါတယ်သဘောတူညီခကျြကိုမွငျလြှငျစိတ်ဝင်စားခဲ့ပေမယ့်သူကညာဖက်ကိုဗီဒီယိုကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲအလုံအလောက်ကြည့်ရှုဘယ်တော့မှ (ရှင်းလင်းစွာသူသညျ လာ. ဘယ်တော့မှ ဖြတ်. ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး၏ဤအံ့ဖွယ်).
porn-မုန်းယောက်ျားအကြောင်းကို / r / askmen ချည်ပေါ်ယောက်ျားတွေတစ်တွေအများကြီးအမှန်တကယ်, ထိုအကြောင်းကိုညည်းညူ။ "[Porn] စသည်တို့ကိုလိင် / သဘောတူညီချက်များ၏ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးရဲ့စိတ်ကူး, အကြောင်းကြားကြောင်းဝါဒဖြန့်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်" ဟုဦးတည်းရေးသားခဲ့သည်။ "အဲဒီအမှုအရာသင်ယူဖို့မကောင်းတဲ့နေရာအရပ် [ဒါဟာင်] ။ " ၌နောက်ထပ်ဆွဲလဲ: "ငါလုံးဝသဘောတူသည်။ ငါလိင်မှဤမျှလောက်များစွာသောလူရဲ့ပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှုဖြစ်ခြင်း porn မှားမျှော်လင့်ချက်များနှင့်အမှားသဘောထားတွေဘို့လူတွေအများကြီးတက်သတ်မှတ်ထင်ပါတယ်။ "
တူသောပါရမီရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတဲ့မျိုးဆက်သစ်ကြောင်း - လိုလားသူ porn ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသူတစ်စုံတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်မ cum-အခမဲ့လက်ဖြင့်ဒီလူကို ယူ. ညင်ညင်သာသာညစ်ညမ်းတဲ့တော်လှန်ရေးလျှက်သောသူတို့အဖို့လေသံတိုးတိုးချင် အဲရီကာတဏှာ နှင့် နှောင့်ရှက်အက်ရှလေ တစ်ခုကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ, ရှိအောင်နှစ်သက်လမ်းအတွက်အားလုံးအလောင်းတွေများနှင့်အလိုဆန္ဒများကိုကိုယ်စားပြုသူအဓာတုဗေဒနှင့်အတူသရုပ်ဆောင်များကို အသုံးပြု. ပူ, ခွင့်ပြုချက်-based porn လုပ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ငါသူကိုအသေးစိတျညာဘက်ရရှိသွားတဲ့နှင့်စစ်မှန်သောဘဝလိင်ကိုထင်ဟပ်ကြောင်းစစ်မှန်တင်းမာမှုနှင့်ချိတ်ဆက်မှုမျိုးကိုတည်ဆောက်ရန်ကွဲပြားခြားနားရုပ်ရှင်ပညာနှင့်စစ်မှန်သောဇာတ်လမ်းပြောပြတစ်ခုကိုညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်စိတ်ဝင်စားဖြစ်ချင်ပါတယ်ရှိမရှိအဖြစ်စပ်စု, အန်ဒါဆင်နှင့်အတူစမ်းပါ။
သူပေါ်ကြီးပြင်းအဆိုပါ porn ၏တိုးတက်လာသောသစ်ကို-and မူကွဲမြင်နေမှဖွင့်လှစ်ဖြစ်င့်ကြောင်းပြန်တုံ့ပြန်, ဒါပေမဲ့သူကသူ့ကိုကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်သံသယ။ ထိုနေ့၏အဆုံးမှာသူ pixels ထက်ကလူအတွက်ပဲပိုပြီးစိတ်ဝင်စားမယ့်ကပြောပါတယ်။ သူလည်းမဟုတ်ရင်သူ့ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းဖို့ကြိုးစားနေလူတို့နှင့်အတူကခဲ့ပါတယ်။ "ကွဲပြားခြားနားသောအမှုအရာနှင့်တူလူတွေကနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကျွန်မသဘောကျတယ်ပဲငါစကားပြောနှင့်အတူအပြန်အလှန်နိုင်သူအစစ်အမှန်လူဖြစ်ရဖွစျသှားပါ" ဟုသူကရှင်းပြသည်။ "ကျွန်မလုံးဝ porn တူသောအဘယ်ကြောင့်အခြားလူကိုလေးစား, ငါကလူကပိုကောင်းတဲ့ဗားရှင်းလုပ်နေပါတယ်ဝမ်းသာတယ်, ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ငါ့ကိုအထင်ကြီးပါဘူးငါနှင့်အတူကောင်းပါပြီ။ "
ကျွန်ုပ်၏ဗွီဒီယိုများကိုဖယ်ရှားရန်နီကိုးလ်ကဘာကြောင့် DMCA များကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့သနည်း t.co/fq9ijuxr1e